Iyo Rank Math SEO WordPress Plugin Inoshamisa! | Martech Zone
Acronyms uye Madimikira
Domain Name Kutsvaga
Pamhepo Ongororo Calculator
Referrer SPAM Chinyorwa
Ongororo Sample Saizi Calculator
Ndeipi Kero Yangu IP?
Brandemonium | Gumiguru 6-7, 2021 | Musangano chaiwo
Webinar: COVID-19 uye Retail - Maitiro Anoshanda Ekuwedzera Kushambadzira Kwako Cloud Investment
Kugadzira Kwevatengi Ruzivo Rwendo muFintech | Pane Zvinodikanwa Salesforce Webinar
Iyo Rank Math SEO WordPress Plugin Inoshamisa!
Mugovera, June 6, 2020 Chipiri, August 24, 2021 Douglas Karr
Vanenge vese WordPress mutengi uye chero zvese tarisiro yatinotarisa inoshandisa Yoast's WordPress SEO plugin kugadzirisa makiyi ezvekutsvaga injini yekushandisa. Kunze kweplagi yemahara, Yoast inopa akawanda eanokosha plugins zvakare.
Ndagara ndichiwana Yoast's SEO plugin kuti ive yakanaka, asi kune akati wandei emhuka dzechipfuwo dzandave nadzo:
Iyo Yoast SEO manejimendi manejimendi ine yayo yega mushandisi ruzivo iyo yakasiyana neiyo WordPress's default mushandisi ruzivo.
Yoast inogara ichimanikidza vanhu kuti vashandure kune imwe kana akawanda emapulagi avo akabhadharwa. Hei… vakapa huru yemahara plugin inoshandiswa zvakanyanya, saka ndinoda kuvaona vachiita mari nechipo icho. Nekudaro, dzimwe nguva zvinongova zvakanyanya kusundira mumaonero angu.
The Yoast plugin inoda zvishoma zvishoma zviwanikwa uye iri kudzikisira saiti yangu pasi.
Isu tinoziva - nefoni uye kutsvaga kuri kutsoropodza - kuti iwe unogona kurasikirwa mazana kana zviuru zvevashanyi kana ako peji rekutakura nguva achinonoka kupfuura mukwikwidzi wako ... saka kumhanya ndiyo nyaya yakakosha kwandiri.
Chinzvimbo cheMath WordPress WordPress Plugin
Shamwari yangu, Lorraine Ball, akataura nezve Rank Math Masvomhu plugin uye ndaifanirwa kuzviyedza ipapo ipapo. Sangano raLorraine, Denderedzwa, inovaka akanaka uye anodhura eWordPress masaiti etoni yevatengi. Ini ndaifarira ipapo kuyedza iyo plugin uye ndokuitakura kumusoro kune akati wandei masaiti kuti ndione mashandiro azvo.
Iyo wizard yekushandura kubva kuYoast SEO Plugin kuenda kuRank Math iri nyore. Imwe mukana wepulagiji ndeyekuti iwe unogona zvakare kuti iunze uye utonge yako saiti redirects. Ini ndinoshuvira dai vakapa mapoka kuronga ako redirects, asi kudzikisa huwandu hwemapulagi kwakakodzera kurasikirwa kwechinhu ichocho.
Ini ndinonyanya kukoshesa Rank yeMathematics analyzer, iyo yakanaka kwazvo kune SEO novices kunyora nekuvandudza zvirimo zvemazwi akakosha avanenge vachinangisa:
Rank Math Math Makomborero uye Zvimiro
Nyore yekutevera Setup Wizard - Rank Math inombozvigadzirisa pachayo. Rank Math inoratidzira nhanho-nhanho yekumisikidza uye yekumisikidza wizard iyo inoseta SEO yeWordPress zvakakwana. Paunenge waiswa, Rank Math inoongorora masayiti ako uye inokurudzira marongero akakodzera ekuita kwakanakisa. Iyo nhanho-nhanho wizard inozoisa yako saiti SEO, maprofayli enharaunda, profiles dzewebhu, uye mamwe marongero eSEO.
Yakachena & Nyore Mushandisi Yemukati - Chinzvimbo cheMathematics chakagadzirirwa kupa ruzivo rwakakodzera kwauri panguva yakakodzera. Iyo yakapusa, asi ine simba mushandisi-interface inosimbisa ruzivo rwakakosha nezve ako mapositi padivi nepositi pachayo. Uchishandisa ruzivo urwu, unogona kunatsiridza yako post SEO ipapo ipapo. Rank Math inoratidzirawo zvakapfuura snippet previews. Unogona kutarisa kuti posvo yako ichaonekwa sei muSERPs, tarisa zvakapfuma zvimedu, uye kunyange kutarisa kuti posvo yako inotaridzika sei painogoverwa pasocial media.
Modular Sisitimu - Shandisa chete zvaunoda uye dzima zvimwe. Rank Math inovakwa uchishandisa modular fomati kuti iwe ugone kuve izere kutonga kwewebhu webhusaiti. Regedza kana kugonesa ma module chero nguva paunenge uchida iwo.
Code Yakagadziridzwa Yekumhanyisa - Takanyora kodhi kubva pakutanga uye takaona mutsara wega wekodhi uine chinangwa. Isu takaisa makore echiitiko mune izvi saka plugin iri kukurumidza sezvazvinogona kuve.
Yakagadzirwa Nevanhu Vanodzosera iyo MyThemeShop - NeRank Math, unoziva kuti uri mumaoko akanaka. Kunyora uye kuchengetedza portfolio ye150+ WordPress zvigadzirwa zvakatidzidzisa chinhu kana zviviri nezvekugadzira zvirinani plugins. Uye, isu takadurura ruzivo rwedu rwese mukukodha Rank Math.
Indasitiri-Inotungamira Kutsigira - Tinochengeta zvedu. Iwe hausi kuzosiiwa wakakwirira uye kuoma kana iwe uchishandisa Rank Math. Isu tinopa inokurumidza kutendeuka-kutenderera nguva yemibvunzo yekutsigira uye kugadzirisa bugs nekukurumidza kupfuura iwe kwaunogona kuzviwana.
Ini ndakagadzirisa yangu yekurumbidza runyorwa rwe WordPress plugins ebhizinesi ine Rank Math seinotsiva Yoast uye Redirection. Ndine chokwadi kuti iwe uchaona zvakanakira.
Shanyira Rank Math
Kuzivisa: Ini ndiri mutengi uye ndakabatana Chinzvimbo Math.
Tags: kuongorora zvemukatimazwi akadzamarank masvomhuseo pluginSitemapsWordpress pluginxml sitemapsyoast
Douglas Karr Saturday, June 6, 2020 Tuesday, August 24, 2021
Douglas Karr ndiye muvambi we Martech Zone uye inozivikanwa nyanzvi yedhijitari shanduko. Doug ndeye Keynote uye Kushambadzira Veruzhinji Mutauri. Ndiye VP uye muvambi we Highbridge, femu inoshanda mukubatsira makambani emakambani kushandura manhamba uye kuwedzera hunyanzvi hwavo hwekudyara vachishandisa matekinoroji eSalesforce. Akagadzira kushambadzira kwedhijitari uye nzira dzechigadzirwa Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Webtrends, uye SmartFOCUS. Douglas ndiye zvakare munyori we Corporate Kubhuroka kweDummies uye co-munyori we Iri Nani Bhizinesi Bhuku.
Matipi mashanu Ekumusoro emaAgency Achitarisa Kuvaka Nyowani Yemari Inodzika mune Dambudziko
Maitiro Ekufananidza 2 Google Calendars
Unofungei?	kukanzura mhinduro
Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.
Yedu Ekupedzisira Podcasts
Kate Bradley Chernis: Maitiro eArtificial Intelligence Ari Kutyaira Hunyanzvi hweKushambadzira Kwemukati
Muizvi Martech Zone Bvunzurudzo, tinotaura naKate Bradley-Chernis, CEO paLely (https://www.lately.ai). Kate akashanda nemhando huru kwazvo pasirese kugadzira nzira dzemukati dzinotungamira kubatikana uye mhedzisiro. Isu tinokurukura kuti hungwaru hwekunyepedzera huri kubatsira sei kufambisa mhinduro dzemasangano Munguva pfupi yapfuura isocial media AI zvemukati manejimendi…
Kuwedzera Kubatsira: Maitiro Ekuvaka Kwako Momentum Yemazano Ako, Bhizinesi neHupenyu Kupesana Nematambudziko Ose
Muizvi Martech Zone Bvunzurudzo, tinotaura naMark Schaefer. Maka ishamwari huru, chipangamazano, munyori akasimba, mutauri, podcaster, uye chipangamazano muindasitiri yekushambadzira. Isu tinokurukura bhuku rake nyowani, Cumulative Advantage, iyo inopfuura kupfuura kushambadzira uye inotaura yakananga kuzvinhu zvinokonzeresa kubudirira mubhizinesi nehupenyu. Tiri kurarama munyika…
Lindsay Tjepkema: Sei Vhidhiyo nePodcasting Zvakashanduka Zvikava Ruzivo rweB2B Ekushambadzira Matanho.
Muizvi Martech Zone Bvunzurudzo, tinotaura kune-co-founder uye CEO weCasted, Lindsay Tjepkema. Lindsay ane makumi maviri emakore mukushambadzira, ari muhondo podcaster, uye aive nechiratidzo chekuvaka chikuva chekusimudzira nekuyera kwake B2B kushambadzira kushambadzira ... saka akatanga Casted! Muchikamu chino, Lindsay anobatsira vateereri kunzwisisa: * Nei vhidhiyo…
Marcus Sheridan: Dhijitari Maitiro Ekuti Mabhizinesi Asiri Kutarisisa ... Asi Anofanira Kuva
Kweanoda kusvika makore gumi, Marcus Sheridan anga achidzidzisa misimboti yebhuku rake kune vateereri pasi rese. Asi risati rave bhuku, iyo Rwizi Pools nyaya (yaive hwaro) yakaverengerwa mumabhuku mazhinji, zvinyorwa, uye misangano yemaitiro ayo akasarudzika ekushamisa kweInbound uye Zvemukati Kushambadzira. Muizvi Martech Zone Hurukuro,…
Pouyan Salehi: Iwo Matekinoroji Ari Kufambisa Ekutengesa Kushanda
Muizvi Martech Zone Kubvunzurudza, isu tinotaura kuna Pouyan Salehi, serial muzvinabhizimusi uye akatsaurira makore gumi apfuura mukuvandudza nekugadzirisa maitiro ekutengesa kweB2B bhizinesi rekutengesa reps uye zvikwata zvemari. Isu tinokurukura nezvetekinoroji maitiro akaumba B2B kutengesa uye kuongorora izvo zvimiro, hunyanzvi uye matekinoroji ayo anotyaira kutengesa ...
Michelle Elster: Zvakanakira uye Kukanganisika Kwekutsvaga Kwemusika
Muizvi Martech Zone Bvunzurudzo, tinotaura naMichelle Elster, Mutungamiri weRabin Research Company. Michelle inyanzvi mune zvese zvakawandisa uye zvehunhu nzira dzekutsvagisa dzine ruzivo rwakakura pasi rese mukushambadzira, kugadzirwa kwechigadzirwa chitsva, uye kurongeka kwekutaurirana. Mune ino hurukuro, tinokurukura: * Sei makambani achiisa mari mukutsvaga kwemusika? * Ungaita sei…
Guy Bauer naTariro Morley weUmault: Rufu Kuiyo Bhizinesi Vhidhiyo
Muizvi Martech Zone Bvunzurudzo, tinotaura naGuy Bauer, muvambi uye wekugadzira director, uye naTariro Morley, mukuru anoshanda weUmault, yekugadzira vhidhiyo yekushambadzira agency. Isu tinokurukura nezvekubudirira kweUmault mukugadzira mavhidhiyo emabhizinesi anobudirira muindasitiri yakazara nevhidhiyo yemakambani. Umault vane inoshamisa portfolio yekukunda nevatengi…
Jason Falls, Munyori weWinfluence: Reframing Influencer Kushambadzira Kuti Ignite Yako Brand
Muizvi Martech Zone Bvunzurudzo, tinotaura naJason Falls, munyori weWinfluence: Reframing Influencer Marketing Kuti Ignite Yako Brand (https://amzn.to/3sgnYcq). Jason anotaura kune kwakatangira kushambadzira kushambadzira kuburikidza nezvenzira dzanhasi dzakanakisa idzo dziri kupa mhedzisiro yepamusoro yezvikwata zviri kuendesa nzira dzakakura dzekushambadzira. Kunze kwekubata kumusoro uye…
John Voung: Nei Iyo Inonyanya Kubudirira Yemunharaunda SEO Inotanga Nekuva Munhu
Muizvi Martech Zone Bvunzurudzo, isu tinotaura naJohn Vuong weNzvimbo SEO Kutsvaga, izere-sevhisi yekutsvaga, zvemukati, uye yemagariro midhiya agency kumabhizinesi emuno. John anoshanda nemakasitoma pasirese uye kubudirira kwake kwakasarudzika pakati peMunharaunda SEO vanachipangamazano: John ane degree rezvemari uye aive wekutanga digitajitori, achishanda muchinyakare…
Jake Sorofman: Kuisazve CRM Kuti Digitally Shandure iyo B2B Yevatengi Lifecycle
Muizvi Martech Zone Bvunzurudzo, tinotaura naJake Sorofman, Mutungamiri weMetaCX, piyona mune itsva mhedzisiro-yakavakirwa nzira yekugadzirisa hupenyu hwevatengi. MetaCX inobatsira SaaS uye dijitari zvigadzirwa zvemakambani kushandura matengesere avanotengesa, kununura, kumutsiridza uye kuwedzera nechero rakabatana dhijitari chiitiko chinosanganisira mutengi padanho rega. Buyers at SaaS…
Tora pfupiso yeemail nezvangu zvazvino zvinyorwa, zviitiko, uye podcast zvakaunzwa kubhokisi rako rekushandisa!
Chikero chetsamba yemumhepo:
Mazuva ese Digest Yevhiki nevhiki Digest
Bhalisa kune Martech Zone Kubvunzurudza Podcast
Martech Zone Kubvunzana paAmazon
Martech Zone Kubvunzana paApple
Martech Zone Kubvunzana paGoogle Podcasts
Martech Zone Kubvunzana paGoogle Play
Martech Zone Kubvunzana paCastbox
Martech Zone Kubvunzana pamusoro paCastro
Martech Zone Kubvunzana paOvercast
Martech Zone Kubvunzana paPocket Cast
Martech Zone Kubvunzana paRadiopublic
Martech Zone Kubvunzana paSpotify
Martech Zone Kubvunzana paStitcher
Martech Zone Kubvunzana paTuneIn
Martech Zone Kubvunzurudza RSS
Tarisa Kunze kwedu Mobile Zvipiriso
Tiri pamusoro Apple News!
© Copyright 2021 DK New Media, Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa
Ongororo & Kuedzwa
Ecommerce uye Retail
YeMahara neThebhu Kushambadzira
Kushambadzira & Kutengesa Mavhidhiyo
Isu tinoshandisa makuki pane webhusaiti yedu kuti akupe ruzivo rwakakodzera zvikuru nekurangarira zvaunoda uye nekudzokorora kushanya. Nekudzvanya kuti "Gamuchira", unobvuma kushandiswa kwema cookies ese.
Usatengese ruzivo rwangu.
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki kunatsiridza ruzivo rwako paunenge uchifamba kuburikidza newebsite. Kunze kweizvi, makuki akaiswa muzvinodikanwa anochengetwa mubrowser yako sezvo iwo akakosha pakushanda kwekutanga kweanoshanda ewebhusaiti. Isu tinoshandisawo echitatu-bato makuki anotibatsira kuongorora uye kunzwisisa mashandisiro aunoita webhusaiti ino. Aya makuki anozo chengetwa mu browser rako chete nemvumo yako. Iwe zvakare une sarudzo yekusarudza-kubuda mune aya makuki. Asi kusarudza kubva mune mamwe makuki kunogona kukanganisa ruzivo rwako rwekubhurawuza.
Nguva dzose Inobvumira
Majiki anodiwa anonyanya kukosha kuti webhusaiti iite zvakanaka. Ichi chikamu chinosanganisira makiki anochengetedza zvigadziriro zvekushanda nekuchengetedzwa kwezvikamu zvewebsite. Aya makiki hauchengetedzi chero ruzivo rwemunhu.
Chero makiki ayo angave asina kunyanya kukosha kuti webhusaiti iite uye inoshandiswa zvakananga kuunganidza dudziro yemunhu pachake kuburikidza ne analytics, zviziviso, zvimwe zviri mukati zvakanyorwa zvinonzi sekusakosha kuki. Zvinotenderwa kutenga mutauro wemvumo usati waita majiki aya pawebsite yako.
SAVE & Bvuma